NAB: အားလုံးဘယ်လိုစတင်ခဲ့ကြသလဲ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » audio » NAB: ဒါဟာအားလုံး Started ဘယ်လို ...
ကောင်းပြီ, ဒီမှာကျွန်တော်ချဉ်းကပ်ဖြစ်ကြ၏ NAB ပြရန်! ပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ကျွန်မကိုယ်စားပြုပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လိမ့်မည် ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်းအဖြစ်ကိုငါစတူဒီယို (အသံလွှင့်ခြင်းနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှု) စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အပေါငျးတို့သနောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏တွေ့မြင်နိုင်သည်အဘယ်အရာကိုမွငျလြှငျ, ထို Show ကိုကြမ်းပြင်မှတဆင့်ငုပ်။
ပင် Show ကိုဆောင်တတ်၏သမျှသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအစဉ်အမြဲ "NAB" ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်သူ "အဘယ်အရာကိုတွေးမိလူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး"ရှိပါသလဲ ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်အကြီးမြတ်ဆုံးစတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းစည်းဝေးကြီးဗိုလ်ခြေဖြစ်ခြင်းအပြင်, NAB ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရေဒီယိုနှင့်ယခုအင်တာနက်နှင့်မီဒီယာဂီယာအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုအခြားပုံစံတစ်မျိုးအဖြစ်အပေါငျးတို့သညျအခွားနှစ်ဦးစလုံးလွှမ်းခြုံ, ထုတ်လွှင့်သည့်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းတခုကြီးမားပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့ကိုယ်တည်း သူတို့ကိုထောက်ပံ့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများ။
NAB လက်နက် (ခေါ် "လေ့အကျင့်ကောင်းများ၏အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်" နှင့်ရုပ်မြင်သံကြား Code ကို) စံချိန်စံညွှန်းပြင်ဆင်မှုအားကနေထောက်ခံအားပေးမှု (သို့မဟုတ်ဥပဒေပြုရေးနှင့်စည်းမျဉ်းရေးရာ) မှပညာရေး, သုတေသနနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာတီထွင်ဆန်းသစ်မှု (NAB Labs က) မှတိုးချဲ့အတူဤသည်နေ့ရက်ကာလ Multi-faceted ရန်ဖြစ်ပါသည် အဆိုပါအရေးပေါ်အသံလွှင့်စနစ် (EBS), In-အကြားအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ညီလာခံများနှင့်အရာခပ်သိမ်းအွန်လိုင်းဖြစ်ရပ်များထဲကနေ။ ကိုယ့်ကိုသူတို့ဝင် က်ဘ်ဆိုက် သင်သည်သူတို့ချိတ်ဆက်နှင့်မည်မျှသူတို့သွားကြပါပြီရုံမည်မျှနှင့်အတူ overwhelms ။
ဝိုး! ဟုတ်တာပေါ့? ငါဖြစ်၏သကဲ့သို့ငါ NAB ၏ဝေးလက်လှမ်းမမီစဉ်းစားအခါတိုင်းသင်, အဖြစ်အများကြီးကိုကွောကျရှံ့ဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုကအားလုံးကိုစတင်ခဲ့တာလဲ အဘယ်အရာကို NAB များ၏နှိမ့်ချစဖြစ်ကြပြီးဘယ်လောက်သူတို့ကယနေ့များမှာဘယ်မှာရခဲ့တာလဲ အပေါ် Read, ငါသည်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်စတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းဒါအဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍကဒီအဖွဲ့အစည်းကအကြောင်းသင့်ရှိစေခြင်းငှါသူတို့အများနှင့်အခြားမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။
လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး, သူ့ဟာသူအသံလွှင့်အဖြစ်နီးပါးကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ 1922 အားဖြင့်ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယူဂျင်းအက်ဖ်မက်ဒေါ်နယ်ယင်းကိုတည်ထောင်သူ Zenith ကော်ပိုရေးရှင်း, NAB အဆိုပါအသံလွှင့်လုပ်ငန်းဘုံလိုအပ်ချက်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်၏ရည်ရွယ်ချက်ထူထောင်ပုဂ္ဂလိကကုန်သွယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အခါက 1951 အတွက်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ၎င်း၏အမည်ကိုပြောင်းလဲသွား; ဒါဟာ (မူလကကရေဒီယိုထုတ်လွှင့်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအဖြစ်လူသိများခဲ့သည် Self-စည်းမျဉ်းများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်အတွက်ယင်းထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းကျင့်ဝတ်၏ codes တွေကိုတည်ထောင်ရန်အဓိကအားဖွဲ့စည်းခဲ့သည် ကရုပ်မြင်သံကြားလူငယ်ကဏ္ဍအစည်းအရုံးစုပ်ယူ; ကြောင့်နောက်တဖန်) 1958 ထုတ်လွှင့်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ၎င်း၏အမည်ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။
အစိုးရကဒီ "Self-စည်းမျဉ်း" ၏မည်သည့်ရှိခြင်းမခံခဲ့ရဒါကြောင့်လုပ်ရပ်ကိုယ်နှိုက်သို့ရတယ်။ 1934 ၏ဆက်သွယ်ရေးအက်ဥပဒေ ဆက်သွယ်ရေး (ဝါယာကြိုးများနှင့်ကြိုးမဲ့နှစ်ဦးစလုံး) ကိုထိန်းညှိဖို့ပထမဦးဆုံးပြည့်စုံဥပဒေပြဌာန်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ အသံလွှင့်ပထမဦးစွာပြင်ဆင်ရေးကာကွယ်မှုပေးသနားခဲ့သည်ကွန်ဂရက်အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် (အပိုဒ်ငါပုဒ်မ 8), နှင့်ထုတ်လွှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများအောက်တွင်ထိန်းချုပ်ရန်အခွင့်အာဏာရှိခဲ့ရာအဘို့, နေရသူများ commerce ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ အသံလွှင့်ထိုကဲ့သို့သောတယ်လီဖုန်းနှင့်ကြေးနန်းအဖြစ်ဘုံသယ်ဆောင်၏ထက်ကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းမူဘောင်လိုအပ်မယ်လို့ဆက်သွယ်ရေး၏တစ်မူထူးခြားသောပုံစံအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။ ဤဖြစ်စဉ်အားလုံးသည်ထို့နောက်ထုတ်လွှင့်မီဒီယာအများပြည်သူအကျိုးစီးပွား, အဆင်ပြေစေရန်နှင့်လိုအပ်ချက်ဝတ်ပြုရမည်သောအတွေးအခေါ်နှင့်အတူထုပ်ပိုးခဲ့သည်။ အဆိုပါ 1934 လုပ်ရပ်အတွက် created FCC သည်, ထုတ်လွှင့်အများပြည်သူအကျိုးစီးပွား, အဆင်ပြေစေရန်နှင့်လိုအပ်ချက်အတွက်ပြုမူသေချာနှင့်အတူတရားစွဲဆိုခဲ့သည့်။
မေလ 1, 1955 တွင်, NARB အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် 1,234 လေး (လွှဲခွင်မော်ဂျူ) ဘူတာ, 327 FM ရေ (ကြိမ်နှုန်းမော်ဂျူ) ဘူတာနှင့်3အမျိုးသားရေးရေဒီယိုကွန်ယက်များ, ကိုလံဘီယာအသံလွှင့်စနစ်, အပြန်အလှန်အသံလွှင့်စနစ်, နှင့်အမျိုးသားအသံလွှင့်ကုမ္ပဏီ, Inc ရုပ်မြင်သံကြားရှေ့တွင်ထည့်သွင်း ယင်းအပေါ်ဆီးနိတ်ကော်မတီ: ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အားလုံး 267 အမျိုးသားရေးရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်များ, အမေရိကန်အသံလွှင့်ကုမ္ပဏီ, ကိုလံဘီယာအသံလွှင့်စနစ်, DuMont ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်နှင့်အမျိုးသားအသံလွှင့်ကုမ္ပဏီ, Inc (ရင်းမြစ်အဖြစ်4ရုပ်မြင်သံကြားဘူတာခဲ့ တရားစီရင်ရေး, Juvenile ဆိုးသွမ်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်မှဆပ်ကော်မတီ, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် Juvenile ဆိုးသွမ်း, ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ, 1955, ကော်မတီပုံနှိပ်ပါ။ )
၎င်း၏ဖွဲ့စည်းရေးပြီးနောက်လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး 1929 အတွက်ရေဒီယို Code ကိုမိတ်ဆက်နှင့်နည်းပညာတောင်းဆိုအဖြစ်နောက်ပိုင်းတွင်, 1952 အတွက်ရုပ်မြင်သံကြား Code ကို (သူ၏စာအုပ်ထဲတွင်လီယို Bogart ရုပ်မြင်သံကြားအသံလွှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုအဓိကရေဒီယိုကွန်ယက်များတို့ကကြီးမှူးပြီးအောက်မှာအလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိ ... [ပု] စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (Bogart အတွက်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ရုပ်မြင်သံကြား၏ခေတ်, p ။ 9, 1956)) ။
သို့သော်နှစ်ဦးစလုံး codes တွေကိုပု Sherman ရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားအက်ဥပဒေ (1982 USC § 15 (1)) ၏တစ်ဦးကိုချိုးဖောက်အဆုံးအဖြတ်ကြော်ငြာနှုန်းမှာ setting ကိုဖြေရှင်းရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကွောငျးတရားရေးဦးစီးဌာနအားဖြင့်အစပျိုးကာရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားဝတ်စုံကိုအောက်ပါ 1976 အတွက်ရပ်စဲခံခဲ့ရသည်။ ထုတ်လွှင့်သည့်ကုမ္ပဏီများသည်ဤကိုလည်း codes တွေကိုဖြင့်ဖုံးလွှမ်းဧရိယာများတွင်အများပြည်သူစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမြဲမြံစေမပြုခဲ့သော FCC သည်အားဖြင့် "အကောင်းအလေ့အကျင့်၏စံချိန်စံညွှန်းများ" အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရပေမယ့်မြဲမြံစေသည့် codes တွေကို NAB မဟုတ်သလိုအတိုင်းလိုက်နာပိုင်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်မဟုတ်။
စာသားစံချိန်စံညွှန်းများထုတ်လွှင့်နှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးစားနေ, အများပြည်သူတို့အတွက် "လင်းနို့သွား" NAB တစ်ပင် Keel အပေါ်အသံလွှင့်။ နှစ်တွေ NAB များသောအားဖြင့် amicus curiae, ဒါမှမဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု၏ဘာသာရပ်ကိစ္စအပေါ်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အတွက်အကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အမြင်များရှိခြင်းအဖြစ် "ဟုတရားရုံး၏မိတျဆှေ", ဒါပေမယ့်မအရေးယူမှုမှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပါတီအဖြစ်ပေါ်ထွန်း, မြောက်မြားစွာတရားစွဲမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပြီး ။ ၎င်းတို့၏အမြင်များကို Post-ထုတ်လုပ်မှု, ထုတ်လွှင့်လွှမ်းခြုံရသော (တစ်ခုလုံးကိုစက်မှုလုပ်ငန်းပတ်သတ်ပြီးအတွက်ဥပဒေရေးရာရှုခင်းပုံဖော်ကူညီပေးခဲ့ မာလ်တီမီဒီယာ နှင့်ဆက်သွယ်ရေးဟာ့ဒ်ဝဲ, ဆော့ဖ်ဝဲ, နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ) ။
ဘေးဖယ်ထားပြီးစည်းရုံးရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာလုပ်ရပ်များဆောင်ခဲ့ရာမှ, NAB (၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များမှတထောင်တဆယ်ကျော် volumes ကို, သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာနှင့်သုတေသနနှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများပါဝင်သောတစ်န်ထမ်းများနှင့်လစဉ်သတင်းလွှာင်တစ်ဦးသုတေသနစာကြည့်တိုက်အပါအဝင်အခြားအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အတူ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များကိုထောက်ပံ့ပေးNAB ကမ္ဘာ့ဖလား)အဖြစ်အပတ်စဉ်စာပမြေား RadioWeek နှင့် TV ယနေ့တွင်.
ကစက်မှုလုပ်ငန်းကိုရည်မှတ်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်နှင့်အခြားအကြောင်းအရာများ၏အခြေခံမူအကြောင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နိုင်ငံသားများပညာပေးနိုင်အောင်အပြင်, NAB, NAB ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကစတင်ခဲ့သည်။ အခြေခံအုတ်မြစ်တွေဖြစ်တဲ့ပရိုဂရမျအကြောင်းအရာ, အယ်ဒီတာအဖွဲ့ထင်မြင်ချက်များနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးမိန့်ခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်းပထမဆုံးပြင်ဆင်ချက်အခွင့်အရေးများအဖြစ်ကိစ္စရပ်များတွင်သုတေသနနှင့်ပညာရေးလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်။ ထိုအခါငါတို့တှငျ 100,000 ပညာရှင်များကျော်ဆွဲနှင့်သတင်းအချက်အလက်, ကွန်ယက်များနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နည်းပညာဆိုင်ရာဟန်ပြ၏ဦးဆောင်အရင်းအမြစ်နေသောဖျောပွနှစ်စဉ်စည်းဝေးကြီးများကိုမေ့လျော့မကွာစေဘဲ!
သငျသညျ (အဘယ်မှာရှိအခြား?) NAB ၏အဓိကဌာနချုပ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လေလှိုင်းကျော်က၎င်း၏အစဉ်အဆက်-နိုးနိုးကြားကြားလက်ပတ်နာရီကိုဆက်လက်နှင့်အသံလွှင့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းတရားမျှတမှုများအတွက်ချီတက်ဦးဆောင်ရှိရာဝါရှင်တန်ဒီစီအတွက်။ နိုဝင်ဘာလ 1, 2009 ၏အဖြစ်, NAB ၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့် CEO ဖြစ်သူဖြစ်ပါတယ် ဂေါ်ဒွန်အိပ်ချ်စမစ်အော်ရီဂွန်ကနေဟောင်းတစ်ဦးကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအထက်လွှတ်တော်အမတ်။
"NAB အမေရိကတိုက်ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ထောက်ခံအားပေးမှုအသင်းအဖွဲ့, ငါတို့သည်ဝါရှင်တန်ရှိရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအကျိုးစီးပွားတိုးတက်၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိ ?? NAB နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် CEO ဖြစ်သူဂေါ်ဒွန်အိပ်ချ်စမစ်ကဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်ခဲ့များနှင့်ဒေသခံရပ်ရွာလူထုအစေခံကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားကောင်းလာစေရန်နှင့်အသစ်အခွင့်အလမ်းများကိုသိမ်းယူဖို့ထုတ်လွှင့်မယ့်စွမ်းရည်ကိုကူညီပံ့ပိုးရန်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖြတ်. NAB ပြရန် နှင့် NAB Labs ကလိုတခြားအစပျိုး, ငါတို့သည်အရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်တောက်ပအနာဂတ်အားပေးအားမြှောက်, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမြှင့်တင်ရန်။
ယင်း၏က်ဘ်ဆိုက်လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့် NAB အကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာပါ: www.nab.org.
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး 2020-01-28
ယခင်: Insight TV သည် ၄၅ နှစ်မြောက်နယ်မြေစတင်ခြင်းဖြင့်နှစ်၏အစကိုကြိုဆိုသည်
နောက်တစ်ခု: Magewell သည် ISE 2020 တွင်ဘက်ပေါင်းစုံ၊ Multi-Protocol Live Stream Decoder ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်